Haintrano goavana tany Marolambo : trano 312 may, kila forehitra ny fiangonana FJKM | NewsMada
Haintrano goavana tany Marolambo : trano 312 may, kila forehitra ny fiangonana FJKM
Trano anjatony maro ,o may kila tany Marolambo. Tsy afa-bela tamin’izany ny fiangonana FJKM sy ny fitoeran’entana. Olona efa 2.243 no traboina tamin’izany ary anjatony tapitrisa ny zavatra may.
Nisehoana haintrano marobe tany Marolambo, tany amin’ny kaominina Androangavola, ny 7 febroary lasa teo, tamin’ny 12 ora atoandro. Araka ny filazan’ny zandary, afo avy tao amin’ny trano fivarotana iray no nahatonga ny loza ary niitatra tamin’ireo trano anjatony. Miisa 312 no isan’ny trano may, ka 78 trano no tafo fanitso, fiangonana FJKM ny iray, fiangonana Témoin de Jehovah ny iray hafa, “magasins de stockage” an’ny FJKM ny sivy hafa, ny iray birao an’ny delege.
Olona 2.243 no traboina noho ity loza ity, ka napetraka any aminny EPP, CEG sy Lycée any an-toerana. Tombanana ho 319.563.000 Ar ny teti-bidin’ny zavatra may tamin’izao fahamaizana izao. Trano fianarana ny ankamaroan’ireo trano may ireo, raha ny vaovao avy any an-toerana ihany. Tonga tany an-toerana ny lehiben’ny distrika sy ireo ben’ny Tanàna manodidina nitondra fanampiana. Nanao famotorana momba ity haintrano ity ny borigady Marolambo.
Araka ny fanazavana voaray, anisan’ny nampiitatra afo haingana ny fahamaizan’ny andro tany an-toerana. Tsy misy koa ny mpamonjy voina, fa ny fokonolona no mifanolo-tanana amin’ny famonoana ny afo. Tsy misy hevitra rehefa mitranga ny haintrano tahaka izao any amin’ny faritra any, fa izay hampihena ny iharam-boina, na fisorohana ny tsy hahafaty olona no azon’ny fokonolona atao. Torak’izany ny niseho tany Vohitsara Amparafaravola, ny 8 febroary lasa teo. Trano 10 may kila forehitra izay nahatraboina olona 400. Niainga tamina trano hazo ny loza ary niitatra. Niezaka ny fokonolona namono afo fa niala maina.